नेपालको संसद् यतिबेला गाँजामय भएको छ किनभने संसद्‍मा गाँजा विधेयकले जो प्रवेश पाएको छ । काठमाडौँको संघीय संसद्‍देखी प्रदेशका प्रादेशिक संसद्हरुमा समेत गाँजा विधेयक दर्ता भएपछि देशैभरि यो चर्चा चलेको हो ।
हुन त अहिले संसद्‍मा प्रवेश भएको गाँजा विधेयक हो । तर संसद्‍भित्रको गतिविधि देख्दा यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ गाँजा विधेयकले प्रवेश पाएको मात्रै भर्खर हो, स्वयं गाँजाले प्रवेश पाएको त धेरै अगाडि नै हो । अहिले संसद्‍मा भाषण ठोक्‍ने नेताहरुको कुरा सुन्‍नुस्, त्यो कुनै गँजडीको गफभन्दा फरक लाग्दैन । त्यहाँ गएर कुरा सुन्नुस्, गँजडी खालमा पुगेजस्तो महसुस नभए मलाई भन्‍नुहोला । होसमा बोलेको हो कि बेहोसमा बोलेको, कसैलाई थाहै हुन्‍न । कोही भनिरहेका हुन्छन्, दुई महिनामा मेलम्चीको पानी झारिदिन्छु । कोही भनिरहेका हुन्छन्, एक वर्षमा सुरुङमार्ग बनाइदिन्छु । अझ कोही–कोही त यस्तो पनि भनिरहेका हुन्छन्, अर्को वर्ष काठमाडौँमा रेल गुड्नेछ । कोही त यस्तो पनि भनिरहेका हुन्छन्, अरे यार जहाजको टिकट काटिहाल, भरे फेरि सिट नपाइएला ।
के यो गँजडीको गफभन्दा कम छ ? संसद् त गाँजाको चपेटामा पुगिसकेको छ । अब गाँजा खाएर सदनमा बोल्ने कुरालाई कानुनी मान्यता दिने मात्रै हो । बाँकी त के हो र !
नगरभरि कोरोनाको आतंक त थियो नै । त्यसमाथि थपियो, औषधीको अभाव । भारतले औषधी नपठाउने रे ! उसो त कोरोनाकै पनि औषधी अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन भनिन्छ । यस्तै अवस्थामा एउटा जानकारीमूलक सूचना आयो– कोरोनाबाट बच्‍ने हो भने अलिअलि कुहिएको स्याउ खानुपर्छ । यदि कुहिएको स्याउ किन्‍न पाइएन भने नयाँ किनेर भए पनि कुहिन दिनुपर्छ अनि खानुपर्छ ।
स्याउ खाए स्वास्थ्य सप्रिन्छ भन्ने त सुनेको थिएँ । तर कुहिएको स्याउले समेत स्वास्थ्य बनाउँछ भन्ने कुरा भने पहिलो पटक सुन्दै छु । त्यसो त यो कोरोना भन्ने रोगैबारे पनि पहिलो पटक सुन्दै छु नि । रोग नयाँ भएकाले उपचार पनि नयाँआएको होला ।
अब यस्तो नयाँ उपचारबारे कसले भनेको त भन्दा सबैले लिने नामचाहिँ एउटै रहेछ, दिलबर बाजे । दिलबर बाजे सबैले चिन्ने मान्छे । उनीमार्फत कुहिएको स्याउबारे हल्ला के चल्यो, बजारमा कुहिएको स्याउ किन्‍ने हरुको भीड लाग्‍न थाल्यो । ताजाभन्दा पनि कुहिएको स्याउको ‘डिमान्ड’ एकाएक बढ्न थाल्यो । धेरैजसो बुद्धिमानहरुले चाहिँ ताजा स्याउकै बोरा किनेर लग्‍न थाले, भोलि केही गरी कुहिएको स्याउ किन्‍न पाइएन भने ताजालाई नै कुहाउन मिल्छ नि ।
स्याउमा भएको यो मारामारी देखेर मलाई अचम्म लाग्यो । के खायो भने कोरोना निको होला र केचाहिँ नखाए कोरोना लाग्दैन भन्ने कुरा आजसम्म चीनले त भन्‍न सकिरहेको छैन भने नेपालमा यो कुहिएको स्याउ प्रेस्क्राइब गर्ने दिलबर बाजेचाहिँ को होला हँ ? मैले दिलबर बाजेलाई खोज्न थालेँ । उनी त विश्‍वलाई नै देखाउनुपर्ने नमुना मान्छे रहेछन् । खोज्दै गएपछि पो थाहा भयो, दिलबर बाजे त नगरमा त्यही स्याउ बेच्‍ने थोक बिक्रेता पो रहेछन् !
कोरोना र मृत्यु
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भित्रियो भन्‍ने सुन्‍नमा आएको छैन । भित्रिएकै छैन त सुन्नमा के आउँथ्यो र ? त्यसैले कोरोना लागेर कोही मरे भन्ने पनि सुनिएको छैन । तर कोरोना नआए पनि त्यसका कारण देशको जो हालत भएको छ, त्यसबाट भने निकट भविष्यमै मरेका समाचार पनि नआउलान् भन्न सकिन्न । जस्तो, चामल किन्‍ने पसलमा लागेको भीडले किचिएर चामल लिन आएका ग्राहकको मृत्यु ! एकैचोटि चार वटा ग्यास सिलिन्डर लिएर जाँदा सिलिन्डरमै ठोक्किएर उपभोक्ता ठहरै ! वर्ष दिनलाई पुग्‍ने दाल लिएर गएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु ! बजारमा म्याद गुज्रेका चाउचाउसमेत हारालुछ, खाएर बिरामी भएका बालकको मृत्यु ! सामान लुकाएको भनी किराना पसलमा आक्रमण हुँदा पसले ठहरै ! बजारमा खाद्यान्‍न किन्‍न नपाएकाले कुपोषण लागेर चारको मृत्यु !
छाँटकाँट हेर्दा अहिले नेपालमा कोरोनाले भन्दा पनि यस्ता घटनाले मृत्युदर बढाउलाजस्तो लाग्छ । यस्तो मृत्युलाई चाहिँ कोरोना लागेर भएको मृत्यु भन्ने कि नलागेर भएको भन्‍ने ! त्यो स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले जानून्, यदि उनी सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा गइसकेका छैनन् भने ।